Motomachi ရှိအလှကုန်ကုသမှုဆိုင်ရာအလှပြင်ဆိုင်ကိုရရန် Total Beauty Salon / Prana သို့သွားပါ
Motomachi ၏အလှပြင်ဆိုင် / plana တွင်အလှကုန်မီနူးကိုပေးထားသည်
ဆဲလ်ချောမွေ့ 60 ကုသမှု
သငျသညျအလှအပနှင့်ကျန်းမာရေး hone နိုင်ပါတယ်
Motomachi ၏အလှအပကုသမှု (အနှိပ်) သည်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်လွယ်ကူသည့် menu တစ်ခုကိုအကြံပြုသည်
Motomachi တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ခန္ဓာဗေဒ (massage) နှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအရောင်များကိုစစ်ဆေးခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။ သင်၏အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေးကိုသင်လိုချင်ပါကကျွန်ုပ်တို့ထံလာလည်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာပြောဆိုပြီးတစ်ခုချင်းစီကိုလေးလေးနက်နက်တုံ့ပြန်လိမ့်မည်။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုစိတ်ကျေနပ်စေမည့်ရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အရည်အချင်းများကိုတိုးတက်အောင်နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ခန္ဓာကိုယ်စောင့်ရှောက်မှုပုံစံနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
၎င်းသည်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများမှကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန် Prana ကိုဆက်သွယ်ပါ။
Motomachi ၏အလှပြင်ဆိုင် (အနှိပ်နှင့်ပရာနာ) သည်နွေးထွေးသောဝန်ဆောင်မှုကိုပေးသည်
ငါတို့သည်လည်း Self- စောင့်ရှောက်မှုအကြံပေးလိမ့်မည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏အလှအပကိုပံ့ပိုးပေးသည့်ပုဂ္ဂလိကအလှပြင်ဆိုင်သည်သီးသန့်ခန်းများရှိပြproblemsနာများနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားမေးသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်မရှုပ်ထွေးသောရှုပ်ထွေးမှုနှင့်မမေးမြန်းလိုသည့်ပြproblemsနာများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အစားအသောက်ပြုလုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောကျယ်ပြန့်သောတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့တုံ့ပြန်လိမ့်မည်။
လှပသောနို့ရည်ကို ၀ ယ်ယူသူများအတွက်အကောင်းဆုံးသော Bust စောင့်ရှောက်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ အဝတ်အစားများနှင့်ရေကူးဝတ်စုံများအားယုံကြည်စိတ်ချစွာ ၀ တ်ဆင်နိုင်ရန်အတွက်သင့်အားခန္ဓာကိုယ်မိတ်ကပ်များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အပန်းဖြေအနားယူနိုင်ပြီး ၀ ယ်ယူသူများစွာ၏ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုအပြည့်ရှိသောအလှပြင်ဆိုင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သည်။ Personal Color Diagnosis, Hypnotherapeutic နှင့် Cell Smooth 60 အပါအ ၀ င်မီနူးအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
Motomachi ရှိ esthetic massage အလှပြင်ဆိုင်၏ပေါများသည့် menu ကိုကြည့်ပါ
မိနစ် ၃၀ ယန်း ၅၀၀၀ (အခွန်မှအပ)
(၆၀) မိနစ် (၁၀) ယန်းယန်း
တစ်ကိုယ်လုံးကုသမှု + အနည်းငယ် ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအစိတ်အပိုင်းများ! (အခွန်မပါ)
မိနစ် ၉၀ ၁၅၀၀၀ ယန်း (အခွန်မှအပ)
မိနစ် ၁၂၀ (၂၀၀၀၀) ယန်း (အခွန်မှအပ)
မိနစ် ၆၀ ၁၈၀၀၀ ယန်း
သင်သည်လှပပြီးကျန်းမာရန်ရည်ရွယ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ပါ
Cell Smooth 60 (CS60) ဟုခေါ်သောအထူးအနှိပ်ခံခြင်းပါဝင်သည်။
ဒါဟာ CS60 ကုသမှုခံယူသူဖောက်သည်များ၏ဘုံစှဲပါ!
ငါအမျိုးမျိုးသောကိုင်တွယ်ကုသမှုကိုသွားပေမယ့် CS60 ပြီးနောက်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလင်းရောင်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်။
နောက်တဖန်ကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်းကိုခံစားရနိုင်သည်၊ ︎
19:00 ပြီးနောက်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းမှုများအတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ဖုန်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
သင့်အလုပ်၏အဆုံးတွင် ကျေးဇူးပြု၍ အနားယူပြီးအိမ်သို့ပြန်ပါ။
ကျွန်တော့်ရဲ့နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်ခရီးစဉ်မတိုင်ခင်ငါ့နားတွေကဆက်ပြီး ဦး ညွှတ်နေတယ်၊ ဒါပေမယ့်လေယာဉ်ပျံပေါ်တက်ပြီးတဲ့အခါငါပိုဆိုးလာတယ်၊
ကျွန်တော့်အနေဖြင့်အိုတီစီမီဒီယာဖြင့်ထိရောက်စွာကုသမှုခံယူခဲ့သည်။ အဲဒီနောက်မှာကျွန်မဆေးရုံကိုနှစ်လလောက်သွားခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့်လုံးဝမတိုးတက်ခဲ့ဘူး၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုရည်ညွှန်းပြီး CS60 ကုသမှုခံယူခဲ့တယ်။
အစပိုင်းတွင်နာကျင်မှုသည်နား၏နောက်ဘက်မှတဖြည်းဖြည်းထွက်လာပြီးရေကန်ထဲ၌ရေထဲသို့ ၀ င်လာသည့်ရေခံစားမှုသည်တဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်သွားသည်။
ငါနှစ်လကြာဆရာ ၀ န်သို့သွားလျှင်ပင်ရောဂါပျောက်ကင်းသည့်အရာသည်သုံးကြိမ်တိုးတက်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်အံ့အားသင့်မိသည်။ ကျွန်တော်ကယ်တင်ခံခဲ့ရပါတယ်
အဲဒီမှာမင်္ဂလာပါ ဤသည်ဆိုလာနာ (^^ is) ဖြစ်သည်5Element တွေအများကြီး Bust အန...
အဲဒီမှာမင်္ဂလာပါ ဒါဟာ Solana (* ^ ▽ ^ *) 2/24 (တနင်္လာနေ့) New Moon Tea Par...
ဟိုင်းဒီ Prana ပါ "မွေ့ယာယိုကိုဟားမားကို" မနက်ဖြန်၊ ၁၃ ရာစုရှိ Kanagawa စက်...
ရွှင်လန်းသော Yokohama ဇန်နဝါရီလ 13, 2020 (Sun) 13: 30-16: 30 တည်နေရာ: လေထုအ...
ကျေးဇူးပြု၍ ဖတ်ပါ၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဘလော့ဂ်များကိုကျွန်ုပ်တို့မွမ်းမံပါလိမ့်မည်
အမွှေးအကြိုင် antibacterial အရေးယူ
အနီးဆုံးဘူတာမှ ၃ မိနစ်ခန့်လမ်းလျှောက်။ သွားနိုင်သည်
Motomachi ရှိအလှပြင်ဆိုင်သည်အမျိုးသမီးများအတွက်သီးသန့်သီးသန့်အလှပြင်ဆိုင်ဖြစ်ပြီးသင့်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ယုံကြည်စိတ်ချစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ၀ န်ထမ်းများသည်ဖောက်သည်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်နီးကပ်ပြီးသင့်စိုးရိမ်မှုများနှင့်တောင်းဆိုမှုများကိုမေးမြန်းလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်အလှကုန်ကုထုံးအမျိုးမျိုးကိုကမ်းလှမ်းသောအလှပြင်ဆိုင်တစ်ခုကိုရှာနေပါက၎င်းကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားပါ။
သင် Motomachi areaရိယာ၌အလှတရားကုသမှု (အနှိပ်) ကိုရှာဖွေနေလျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
၎င်းကို Motomachi ရှိလူထုအခြေပြုအလှပြင်ဆိုင် (အနှိပ်) အလှပြင်ဆိုင်အဖြစ်လူသိများသည်
မည်သည့်အသက်အရွယ်မဆိုလှပနေချင်သောဖောက်သည်များ၏ခံစားချက်နှင့်နီးစပ်သည့်အလွန်ကျေနပ်စရာကောင်းသည့်အလှတရားမီနူးကိုကျွန်ုပ်တို့တီထွင်ခဲ့ကြသည်။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်ကုသမှုကိုရရှိရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသောဖောက်သည်များမှကျောင်းသားများမှအိမ်ရှင်မများထံမှမေးမြန်းမှုများကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒေသအတွင်းယုံကြည်စိတ်ချရသောအလှပြင်ဆိုင်ဖြစ်စေရန်ရည်ရွယ်သည့်တစ် ဦး ချင်းတောင်းဆိုမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်တောင့်တသောစတိုင်သို့မဟုတ်သင်၏တစ်ကိုယ်လုံးကိုအထူးနေ့တစ်နေ့တွင်ဂရုစိုက်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအရောင်ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းပြုလုပ်ပေးပြီးသင့်အားမည်သည့်အဝတ်အစားများကြည့်ကောင်းသည်၊ သင်ချက်ချင်းလေ့ကျင့်နိုင်သည့်နည်းစနစ်များကိုသင့်အားပြောပြသောကြောင့်၎င်းသည်ခိုင်မာသောထင်မြင်ချက်ကိုအမြန်ဆုံးရလိုသောဖောက်သည်များအတွက်အကြံပြုသည်။ ၎င်းသည်ပုဂ္ဂလိကအလှပြင်ဆိုင်ဖြစ်သောကြောင့်အခြားဖောက်သည်များ၏စိတ်ပူစရာမလိုဘဲကုသမှုနှင့်ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုဖြည်းဖြည်းချင်းခံစားနိုင်သည်။ ဘာမဆိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည့်စုစုပေါင်းအလှပြင်ဆိုင်ကိုရှာဖွေနေကြသော ၀ ယ်သူများသည်အမျိုးသမီးများစွာ၏မိတ်ဆွေဖြစ်ကာအလှအပဘဝကိုအထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
သင်တစ် ဦး esthetic (အနှိပ်) ကိုခံယူဖို့သွားလျှင်, Motomachi အတွက် Prana ကုသမှုကြိုးစားပါ
ကြွင်းသောအရာများ၏နေ့၌ထို့နောက်သင့်ရဲ့ပင်ပန်းသည်အနာပျောက်စေသောချင်အလုပ်ကနေပျူငှါနွေးထွေးသောစုစုပေါင်းအချိန်လွှဲတဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ်ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါအလှပြင်ဆိုင်, သင်၏လမ်းနေအိမ်ကို run ခြင်းနှင့်ရန်ရှိသည်ကျနော်တို့ဒါ။ ပထမဦးစွာဖောက်သည်ကယခုခိုင်မြဲစွာအကြံပေးခြင်းထုတ်ဆောင်သွားစေဘယ်သို့သောအားဖြင့်နှောငျ့ထားပြီးရှိမရှိနားလည်ရန်, ငါတို့ကအကောင်းဆုံးကုသမှု menu ကိုမိတ်ဆက်ပေးဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ မိမိတို့၏အသွင်အပြင်ကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲချင်သောဖောက်သည်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့နှင့်ကိုက်ညီသောအရောင်ကိုရှာဖွေရန်လွယ်ကူစေရန်နှင့်ကိုယ်ပိုင်စုဆောင်းထားသည့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျှော့ချလိုသောဖောက်သည်များအတွက်တုံးဂရုစိုက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ သင်ခိုင်မာသောလည်ပင်းနှင့်ခြေထောက်၏ရောင်ရမ်းခြင်းအပါအဝင်ရောဂါလက္ခဏာအမျိုးမျိုး, တခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုမြျှောလငျ့နိုငျသောကွောငျ့သင့်လျော်သောဆွ၏ Rinpakea, လာမတှနျ့ဆုကြိုးစားကြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးပေါ်ဗဟုသုတနှင့်နည်းပညာများအကြောင်းကိုလေ့လာနေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များပြုံးစေသည့်ကုသမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တတ်ကျွမ်းနားလည်သော ၀ န်ထမ်းများကသင်၏မေးခွန်းများအားလုံးကိုဖြေကြားပေးပြီးသင်၏လှပမှုဘဝကို ပို၍ ပျော်ရွှင်စေပါလိမ့်မည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကမတိုင်မီပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်, ရှိသမျှအားဖွငျ့သုံးပါ၏အရေးကြီးသောနေ့၏စောင့်ရှောက်မှုပေးရန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အခါ, စိတ်ပိုင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနားယူနိုင်ကြသည်တဲ့ကောင်းတဲ့အာကာသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
အဆိုပါ Motomachi အတွက် prana ၏အလှပြင်ဆိုင်ကျနော်တို့ကကျေနပ်အားရမှုဂုဏ်အသရေအကြောင်းအစိုင်အခဲအသိပညာနှင့်အတူအကြံပေးခြင်းနှင့်ကုသမှု၏မြင့်မားသောဒီဂရီကယ်နှုတ်တော်မူရန်ရှိသည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်မှာစုပေါင်းအလှပြင်ဆိုင်ဖြစ်ပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိသောလေထုနှင့်ကုသမှုအမျိုးမျိုးကိုပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့်ပထမဆုံးအနေဖြင့်သုံးစွဲသူများသည်စိတ်ချစွာအနားယူနိုင်သည်။ ဒေသခံအမျိုးသမီးများမှကျွန်ုပ်တို့တွင်နာမည်ကောင်းရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အလှအပတိုးတက်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့ထံလာလည်ပတ်ပါ။
အလှအပနှင့်လုံးဝသဟဇာတဖြစ်သောကြောင့်များသောအားဖြင့်ဂရုစိုက်မှုအမျိုးမျိုးကိုအတူတကွကြိုတင်စာရင်းပေးလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်အပန်းဖြေအနားယူရန်အတွက်သီးသန့်အခန်းတစ်ခန်းတွင်သူတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂရုစိုက်လိုသောဖောက်သည်များကြားတွင်ရေပန်းစားသည်။ စုစုပေါင်းအလှပြင်ဆိုင်သည် Motomachi တွင်စတိုးဆိုင်ရှိပြီး အလှကုန် ကုသမှုမီနူးအမျိုးမျိုးကိုပေးသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကုသမှုအားလုံးသည်ဖဲစောင့်ရှောက်မှုမှမွေးဖွားပြီးနောက်စောင့်ရှောက်မှုသို့ထားခဲ့ပါ။